Light-emitting diodes (LEDs) dia fitaovana semiconductor izay miteraka hazavana ety spectrum. Misy koriana elektrika mandalo amin'ny microchip misy ao amin'ny LED mba hanazava ny fitaovana sy hamokatra hazavana hita maso. Ny jiro LED dia loharanom-pahazavana mivantana izay manome famirapiratana sy hamafin'ny ...
Ny tombony voalohany amin'ny SILVER OPTICS 99
Glass Optical Silver Coated Reflectors SILVER OPTICS 99 — KINGS OF GLASS REFLECTORS Raha fintinina: 1. Silver Coatings Ultra-High Reflectivity 99% - Maximum Light Efficiency, hatramin'ny 15%~25% mitombo hazavana kokoa. 2. Tarehim-pandinihana midadasika kokoa - Reflectance Spectral tsara kokoa. 3. Top Optical Design...
Fanamafisana ny mety ho zava-manirynao miaraka amin'ny GrowBetter Silver Inside Glass Reflector.
nataon'ny admin tamin'ny 20-07-14
GROWBETTER 1000W DE REFLECTOR Manatsara ny fahafahan'ny zavamaniry miaraka amin'ny GrowBetter Silver ao anaty fitaratra fitaratra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaratra volafotsy ao anaty fitaratra dia afaka mahazo hazavana fanampiny be dia be amin'ny zavamaniry ianao nefa tsy mampiasa herinaratra intsony, ka miteraka haingana kokoa sy lehibe kokoa ...
Dingana telo amin'ny fampandrosoana ny traikefa amin'ny teknolojia fanaraha-maso ny greenhouse
nataon'ny admin tamin'ny 20-07-09
RikoLite Slim Bar 320W 630W Full Spectrum Greenhouse Plant Lights Ny trano fonenana dia toerana iray afaka manova ny tontolon'ny fitomboan'ny zavamaniry, mamorona ny fepetra tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny zavamaniry, ary misoroka ny fiantraikan'ny fiovan'ny vanim-potoana any ivelany sy ny toetr'andro ratsy. Izy io dia mampiasa saron-tava amin'ny...
Karazana marika OEM ho an'ny vokatra jiro LED anao
nataon'ny admin tamin'ny 20-04-21
1. Adhesive Labels Ny safidy voalohany dia ny mametaka ny vokatra jiro maniry maniry miaraka amin'ny etikety adhesive. Izy ireo dia mora amboarina miaraka amin'ny logon'ny orinasanao araka ny fomba fanoloranao azy, ary tsy misy fepetra takiana, midika izany fa hokarakarainay ny etikety adhesive anao amin'ny isan'ny prod...
Fiovam-po - PPFD ho Lux
FANAMARIHANA: Ny fiovam-po avy amin'ny PPFD (µmol m-2 s-1) mankany Lux dia miovaova amin'ny loharanon-jiro samihafa. Raha mila fifanakalozan-kevitra feno dia jereo ny reference eto ambany. PPFD (µmol m-2 s-1) mankany Lux Loharanon-jiro fiovam-po ny hazavan'ny masoandro 54 Jiro manetriketrika fotsy mangatsiatsiaka 74 Mogul Base High Pressure Sod...
Ahoana no fiantraikan'ny tara-masoandro amin'ny fitomboan'ny zavamaniry?
200 – 280 nm UVC taratra taratra izay tena manimba ny zavamaniry satria tena misy poizina. 280 – 315 nm Misy taratra ultraviolet UVB manimba izay mahatonga ny lokon'ny zavamaniry hanjavona. 315 - 380 nm Ny taratra ultraviolet UVA izay tsy manimba na mahasoa ...
Voninkazo & Voankazo
Jiro Hps, Zavamaniry Voninkazo An-trano Fahazavana ambany, Fahazavana UV ho an'ny zavamaniry, Led Veg Light, Led Hydroponic Light, Full Spectrum Led,
Hijery misimisy kokoa+